MUUQAAL: Faysal C. Waraabe “Muuse Biixi Wuxuu Qabtay dagaalka Tukaraq” Waraysi Xiiso leh & Eedayn Puntland | KALSHAALE
MUUQAAL: Faysal C. Waraabe “Muuse Biixi Wuxuu Qabtay dagaalka Tukaraq” Waraysi Xiiso leh & Eedayn Puntland
Oct 11, 2018 - 18 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ee UCID oo Waraysi dhinacyo badan taabaysa Siiyeyey Telefshinka Goobjoog ayaa ka hadlay arimo kala duwan.
Ugu horayn waxaa wax laga waydiiyey xaalada Somaliland iyo Xukuumadda Muuse Biixi, Wuxuuna sheegay inaysan Jirin wax Tallaabooyin ah oo ay Qaaday, marka laga reebo dagaalkii Tukaraq.
Wuxuu dhankiisa soo jeediyey in deegaanada ka maqan somaliland lagu tago Sidii ay horay Somaliland ku gaadhay Deegaano ay kamid yihiin Xudun, Taleex, Laascaanod iyo Kalabaydh, Wuxuuna xusay inaan Muuse Biixi kala tashan.
Faysal ayaa Gudoomiyaha xisbiga Wadani ku eedeeyay inuu Xidhiidh la leeyahay Dawladda Soomaaliya, Hadana Wuxuu a sheegay inaysan Xaaraan ahayn in lala shiro Siyaasiyiinta Dawladda Soomaaliya, Waxaana sidoo kale wax laga waydiiyey Guul-darooyinka uu kala kulmay doorashooyinkii.
Wuxuu ka hadlay Isbadalka ka dhacay deegaanka Soomaali Galbeed, Xidhiidhka ay la doonayaan in la Samaystaan, Waxaana la waydiiyey iyadoo Hargeisa laga dhiibi Jiray ONLF Waxay maanta ugu casuumayaan.
Puntland ayuu sheegay inay tahay meesha dhibaatada ugu badan ku haysa Soomaaliya, Wuxuuna Waraysigan uga hadlay arimo kala duwan.
Alaa maxaa qofwalba iska hadlaa! Haye Muse Biixi ma Tukaraq ayuu aaday! Kkkkkkk
Waryaa ticket iisoo dira aan Muuse Biixi Yoocada kusoo dhaweeyee..
Garoowe ma laga yaacay oo kii ugu dambeeyey Xeebta Eyl orod ku galay..
Somaliland tuuladii Garoowe gantaalaha ma ku dul xiratay?
Allow naga qabo “the mighty Iidoor” oo weliba xayraansan oo Muuse Biixi iyo Faysal Waraabe hogaaminayaan..
Arigii Ciise Maxamuud oo xeryaha Bixin looga cararay Iidoor iska qalanayaan caawa.
Gabdhihii Harti oo ragooda ka carareen oo qabteen! Dabatoobka Iidoor darayo caarkiisa.. Armaama caarka Hawiye u dhaamay?
Gaas waa saleelo oo LOP ayaa haatan caymad ah, adigaba aqlaa leedahee carar maxaa dhaama, kollay LOP iyo reerkiisa hoose Yemen ka sokayn maayaan.
Annagu aan islaynee,Gaaloow na caawi,sguulka noo shis,dhakhatr noo dhis oo lacagna noo raaci aan wax ku iibsanees.Anngu aan islaynee,Gaalow/Beesha Calaamkaay Biyo aan cabno noo soo saara.
Dadka Somaliyeed may gaadhin heerka Aadamaha.Maalinkasta waa uun lays haystaa oo calaacal baa lagu jiraa.
Isma caasi Somalida.
Lop . K.k.k. Funny sarcastic ! Sxb isoo wac si aan kuusoo damiinto K.k.k.k !
Aniga haddii la i weydiiyo! Reerka Harti la yiraado hadda ka din Isaaqa wax hala waydiiyo oo Suldaan ha u noqdeen!
War aduunku waa harka labadiisa gelin!
Aniga reerkayga Majeerteen waa ayaa Hawiyaha iyo cidka kasta la degta Koofur Suldaan u ahayn!!
Maanta saxaraha Garoowe naloogu booteeyaa, bal in Suldaan la i yiraado ha joogtee..kkkkkkkkk
Nolosha cusub halasoo dhaweeyo, waa baan boqor ahaa la dilay waxaa ka fiican anoo nool ayaan jikada ka shaqeeyaa!!
Bal ka waran haddii Daraawiishtii Harti inta nin Iidoor ah oo Hargeysa ka yimid inta Laaska shiriyo waxa samaynayaan u sheegayo oo madaxa wada ruxayaan.. Kkkkkkkkk
Sayid Maxamed, Cali Dhuux, Qamaan Bulxan, Gooni, Cali Sharmarke, Salaan Carabey, Samatar Baxnaan, Aw Muuse Ismaciil Samatar.. Ragga gabya ma tirin karo, laakiin caawa hadday nool yihiin waxay oran lahayeen Harti gun buu noqday oo gabayo u tirin lahaayeen..
Cali Jaamac Haabiil, Maxamed Fiin iyo rag kale oo Isaaq ah caawa qosli lahaayeen..
Anaa kuu talin waxaa ka daran bahdil iyo war ha igu soo celin..
Sxb Iidoorku ka gobsan Hawiyaha, Muuse Biixi iyo ragiisu marka noogu yimaadaan Garoowe oo garka qabsano waxaan aaminsanahay in maatada noo badbaadin..
Meesha Dabshid, Mr Bahal, Garqaad ay macal ayeeyadii naga kufsateen.
Sxb Ninka Laascanood, Xudun iyo xaruntii Darwiishta Taleex fadhiya oo Harti ku bahdilaya Garoowe maxay tahay..? si kasta xarun Puntland tahay, waa bahdilantahay oo hantaal looga soo ridi karaa Taleex.. 90 km.
Caawa waa hubaa in Nugaal godan iyo banaankii Bixin la iswaydiinayo ma colaad ayaan ku jirnaa mise nabad..?
Sxb Harti ama Darood heshiis maaha, Mudug iyo Soolna weerar looga yahay..
Sxb Iidoorkii dhalfo la soo baxeen cid Harti ah oo hadli karta Majeerteen ayaa la hayaa!..hhhhh
Hadaan Dhabayaco aqaana inta gabar ka nooshahay cidkale wax u yeerin mayso..
Sxb Jaale Siyaad wuxuu kasoo jeeda dhulka Somalia igu qanisan=gobolka Gedo, xitaa hal cisbitaal ama xitaa laami kama dhisin… Ogow waa dhul aniga aqaan.
Webiga Jubba Somali u taqaan ama wabi Ganane Oromo u taqaan oo Dhoobley badda uga dara, wuxuu soo maraa Yeed, Luuq, Baardheere, Buaale, Jilib, Jamaame ilaa Dhoobley badda ku biyo shubo..
Ma jiro Jubbaland dhul ka qanisan Africa.
Siyaad Bare qabiil yaqaanay in been tahay oo
Isaaq iyo Hawiye mustaqbalka Somali ku qosli doonaan.. Aduunkana yaabeen marka Isaaq iyo Hawiye yiraadeen sidii 1960 xoriyad qaadanay Daarood na haystay oo waxwalba ayaga qaatay..!!!!
Aduunku cawaan maaha markii la fiiriyey meesha Darood dego oo xitaa nolol basic ka jirin iyo dadka cabanaya oo dega Hargeysa, Berbera, Xamar ilaa Kismaayo… Waa yaabeen… Way isqabadsiin waayeen in Gedo xitaa jid ahayn Hargeysa warshad Shamiito ku taabay iyo dekeda ugu casrisanayd 1970. Airporka Berbera longest run way in Africa to this.. Macal setilite/ Dayaxgacmeed Discovery markii problem qabsaday meeha keliya ku degi karo noqotay Berbera iyo Johanesborg South-Africa.
Chine UN ambassador mar Somaliland looga dooday UN yiri= ma jiro gobol Somali ah oo xaq ka ka qaatay Somalia aan ahayn Somalliland.
Google: China refuse Somaliland as a victim of Somali dictator 2006..
Hoos ka aqriso sababta.
Jid laami ah wuxuu ku dhamaada Baydhabo marka u socoto Baardheere. Baardheere waxaa mara Webiga Jubba.. Garbaharey waxay u jirtaa 90 km, buurbaa u dhaxaysa.. 3 beri loo dhaxo baabur iyo dad 90 km.
Baardheere waxaa u dhow meel Markabley la yiraado, 6 km qiyaas u jirta Baardheere.
Markabley waa god weyn oo webigii Ilaa Luuq ka yimid kusoo rogmado, marka godka markabley buuxsamo webigii sii socdaa oo ila Buale, Jilib, Faanole iyo Jamame sii aada ilaa badda Dhoobley-Kismaayo uga daro.
China aya 1976 yiri meeshaan koronto iyo beero ku filan 30 million qof ka dhisin ayagoo Faanoole bilaabin.
Waxaa lagu yiri= Somali oo dhan waa 6 million.. From Lowyacado Djibouti agteeda, Raascasayr to Raaskaboni, Kenya border!!!!
Inta yaabeen, ayey qalabkoodii gurteen.. Oo yiraadeen xita Faanoole ayaa idin ka badan!!
Siyaad Bare Mareexaan xitaa jid Baardheere, Garbaharey iyo Luuq aada uma dhisin oo dalka haystay 21 sano.
Ma Garowe iyo Bossaso ayaa rajo ka sugin ama u dudin. Qofka Somali ah Kacaankii in qabiilkiisa wax u qabtay ku eedeeya waa qof xoolo ah, oo hadalkiisa lagu lala boodo..
Waxaase yaab leh in Hargeysa iyo Xamar ay Kacaankii Daarood Garowe, Garbaharey iyo Baardheere ka masayreen in qabiil loogu hiilayey.
Daarood qabiil ila ah anaa wasa!
Car Baraxley iisoo dhaafa!!
Xamar iyo Hargeysa ilaa 1960 Somali u sadburinaysay Kacaankii iyo ka horba.
Mashruuc kasta Somali hesho waa Xamar ama Hargeysa!!
Majeerteen ayaa yiri war sidaan xaq maaha!
Kacaandiid, Mahbar iyo shisheeye kalkaal lagu tolay, hade waa rag ku doodaya; dalka xaq baan ku leenahay oo SYL 70% reer Puntland, ceel biyo macaan u qoda Garoowe oo caawa xitaa biyo lahayn la cabi karo..!
Kacaankii wuxuu ku jawaabay xira iimaanlaawayaasha!!!
Sow xaqii feeraha kama dilaacin oo qaran Puntland la yiraado cirka kama soo dhicin!
Insha Allah 1000 sano ka facweynaan doono.
Darood waxaa la haray Quule cun Mareexaan oo Hawiye biyo ka daba sida iyo Geelwas Dhuloos oo Isaaq biyo ka daba sida,
Dalka iyo dadka halawada simo ama nagu kala wada.
Dadkii ilaa xoriyadda Somalinimo u ordayey waxba loo qaban weli Somalinimo oo macal Ina Qaybdiid xasuuqay Somalinimo Garoowe dhexfadhiyo maanta la joogo weli niic lala dabasocdo.
Iidoor Somalia in kala jaro raba iyo Hawiye Mooryaan 30 Sano Ugandese naga adeejiyey ka mudan yihiin reer Puntland oo goosasho iyo Udandese labadaba diiday oo qaran u taagan…
Maalinta Puntland Madax ka noqdo: Digir iyo budo loo kala bixin… No more Garowe 1*2, Dastuur ama Farmajo, Khayre loo niikiyo iyo Qaybdiid iyo Xaawo Yarey loogu caawa Garowe ii fadhiyo.
Somalinimo u dhimo “ma weligaa ha lagu wasaa?
Lop haaye , waan gartaye sidee horey loogu soconkaraa hadduu xaalkaagu yahay ” Car iisoo dhaaf Baraxley ” Qofkastaa oo muwaadin ah TOOSHKA ha kushida horjoogigiisa ka qaada canshuurta een ugu adeegin. Maxaaba la iigu xuuxinayaa horjooge degaan kale ku haya DARA-BUDHLE ( Jugle ) / aka qoorsagaaro .
” Jirriqaa jooga xilli barwaaqo ah kitaar buu qaraacdaa , halka ay quraanjadu kaga mashquulsantahay aruurinta keydka abaarta imankarta.
Soomaali hadaannahay waxaan leenahay caqli Jirriqaa
Lop k.k.k. Ma qarnigan la jooga ayaad soo qufeysaa xabaalaha . War Daarood iyo Quulleba waxaa iga xiga muwaadin reer Raage Ceele ah oo shaaha iyo rootiga uu iibiyo ka bixiyo canshuurta , helana adeegiisa.
Lama lihi xiriir reer aakhiraadka .
Lop sxb habeen wanaagsan . Insh’allah waa inoo mar kale. Hana ilaawin inaad ku dhalatay Muqdisho qarnigii labaatanaad dhexdiisi ! Inkastoo uu Mr. BaHaL iibsaday gurigaad ku dhalatay misana wali reer Banaadir baad tahay . Mise Mudane Garqaad baa ku HABSADAY gurigii k.k.k. ,( Kaftan)
Hore ayaan u sheegay inuu Reerku si u yahay Laangaab.
waxbaa iga boobay hadalkii e
Waar Reer ku guribaa lagay dhacay badanaa kkkkkkkk
Idinka oo qaawan ayaad timaaadaan Muqdisho,tii oo guryo aad leedihiina waad ka sheekaysaane,bal soo cadaysta wixii aad Muqdisho la timaadeen.
Adoo madhan ayaad timid,adoo madhana waad ka tagtay kkkkkkkkk
Naxaad rabtaan oo kale?
Waar joojiya gardarada oo naga aamusa wax aad guryo la timaadeen Muqdisho ma jirtee.
Anigu aad ayaan u xiiseeyaa wareysiyada Feysal Waraabe,
Wuxuu ku leeyahey Afka qabiilka ma aqaano oo cod kuma raadsankaro, hadana wuxuu leeyahey shir beeled ayaan qabaneynaa hadduu Muuse diido waxaan rabno
Wuxuu ku leeyahey Vision ayaan leeyahey, hadana wuxuu leeyahey Somaliland waxaan ku celineynaa waqtigii SNM hadaan teena la yeelin, Muusana wuxuu noqon Kabo-qabiil.
– Wuxuu leeyahey Ciyaalka Xamar siyaasaddii Dibadda waa nooga dheereyeen, hadana wuxuu leeyahey Waa been ku nool oo meelay xukumaan ma jiro.
( waxaanse ku raacsanahey inaan Gaalka Gumeystahaa laga yeelin -Dumarka qeyb meel u dhiga, (siduu sheegay Feysal ma jirto book yaalo Parliament UK oo ay ku qorantahey % kaas waxaa iska leh XAAWALEY).
Feysalow kuguma heysano Tukoraq iyo Yaacada oo waa North Somalia, laakiin Carabkaada ha barin inaad u booteyso degmo ka tirsan Koofurta Soomaaliya GAROWE.
Hala dhowro heshiiskii 1958 ee midowgii Northern and Southern Somalia.
Sawkii Mr Gaas yimiday Badhan ee aamuseen Reer Hargeisa.
Waar dee meeshan Somaliya faanbaa nolosha seejiyay.
Walaahi inta dad la kaftamo qofkaa xigmad badan Kalshaale masoo galo..
Geed baad ku xirtay hadalkaygii tirada badnaa..
Waa runtaa; in hore loo socda, laakiin Maryooleyda waa in marmar runta xasuusiyo.
Waa ka helay murtidaan….run
“Jirriqaa jooga xilli barwaaqo ah kitaar buu qaraacdaa , halka ay quraanjadu kaga mashquulsantahay aruurinta keydka abaarta imankarta” big words.
Sxb reer Somali dhiig u huray oo dhib loogu abaal guday ayaan kasoo jeeda, hadana meel danta guud uga haro ma arko.
Europe aniga shilin haysan soo galay, gurina ka dhistay una malayn maayo in la oran adoo shilin haysan ayaan noo timid, shilina lama baxaysid, dilna waxaan howl qabtay la iigu darayn, weliba inta noolahay in pension iyo dawadayda la balan qaadin,.. Waana dhul shisheeye, laakiin ogyihiin xaqqa ku leeyahay oo shaqeeyey markaan xooga lahaa.
Adigu Mooryaan in dalkaygii wixii shaqaystay laga dhaco waajib tahay maadaama waagii aan waxwadan..
Sow ma ogid ninka Apple aasaasay Steve Jobs in aabihiis Dimishiq Syria ka yimid, maanta bigest company in the world.
Xamar marti kaagama ihi oo guryo million dolar jooga nalagu baryo ku leenahay, qaarka dhacdeen who the fuck cares? Aniga maba xasuusto gaajana iima hayso.
Kuye maxaad la timid? We created our wealth, inaad wateena waa dhici kartaa.
Dalmida ayaa yaabay!
Waa seexday Cafis kulli, macal Bahal,
sxb ogoow,Somali oo dhan ayay wax ka xumaadeen,noloshii iyo qarankii Somaliyeed ayaan dubanay hadaan nahay Somali.
Qaybta ugu wayn ayaad ka ahayd dadka wax dumiyay hadaad tahay qayska sheegta Reer Majeerteen.Hal wax uunbaa haboon in aan ku dhaqaaqno,kaasi oo ah in cadaalad lagu dhaqmo oo uu Somalikastaa helo cadaalad.Inta ay taasi maqan tahay,inta qaab qabiil loo fikirayo ee aaduu kow ka tahay dadka dabada ka riixayaa qabiilka sidaa ayaa lagu jirayaa.
Waxaase yaab ah inaad aduu noqoto Hasha Geela cunta ee hadana cabaada.
Ilaahay ayaan ku dhaartee,hadiiba aan Somali aqaano ma jiro ama wuu yaryahay ninka Somalisan ninka Reer Muqdisho.
Waxaad ninka dhibka ooo dhan Aaabaha u ah,hadana wixii ay Somali oo xoolo ka dumay ee la wada iloobay,isagu la soo taagan Guryaa layga dhacay.
Hadaad fiican tahay,dadkuna way fiicnaane bal aduu iska biloow.